जन्ती लिएर फर्कंदै गरेको बस दुर्घटना : ४ को निधन, बेहुला-बेहुलीसहित ५२ घाइते - Nepal Insider
जन्ती लिएर फर्कंदै गरेको बस दुर्घटना : ४ को निधन, बेहुला-बेहुलीसहित ५२ घाइते
March 5, 2020 97
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको शिखरकटेरीमा ना ३ ख ३५५६ नम्बरको मकवानपुरगढीदेखि हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको जन्ती लिएर फर्कदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा चार जनाको निधन भएको छ । मृ’त्तक तिन जनाको घटनास्थलमै ज्या’न गएको हो भने एक जनाको उपचारका क्रममा निधन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा परी ५२ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार निधन हुनेमा गढी–७ बस्ने वर्ष ३५ को सोमबहादुर रुम्बा र सोही ठाउँ बस्ने वर्ष २९ को सोमबहादुर मोक्तान रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । बाँकी २ जना मृ’तकको सनाखत भएको छैन् । घाइतेको घटनास्थलबाट उद्धार कार्य भै अस्पतालमा लागिएको छ । जीतपुर भञ्ज्याङ्ग, लेनडाँडाबाट गढी वडा नम्बर ७ को सुकौराका लागि हिडेको ना. ३ ख ३५५६ नम्बरको बस ओरालोमा ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको बताइएको छ ।
बेहुला-बेहुलीसहित अन्य घाईतेहरुको हेटौंडा जिल्ला अस्पताल र चुरेहिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बस चालक भने फरार रहेका छन् ।
त्यस्तै मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ राधेराधेस्थित सशस्त्र प्रहरीको पेट्रोल पम्पसँगै पूर्वपट्टी एवं अरनिको राजमार्गको दक्षिणतर्फको सर्भिस ट्रयाकमा जोडिएको खाली जग्गामा मानव कङ्काल भेटिएको छ ।
स्थानीय राजेश श्रेष्ठको जग्गाको झाडी फाड्ने क्रममा आज मानव कङ्काल भेटिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिका प्रहरी नायब उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मानव कङ्कालमा रहेको पुरुषको लुगा, टाउको र अन्य शरीरको अङ्गहरुको टु’क्रा भेटिएको र कसको कङ्काल हो भन्ने पहिचान हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सो कङ्काल पुरुषको भएको तथा कङ्काल धेरै अगाडिको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीको छ । घटनास्थलमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फोरेन्सिक मेडिसिन ल्याबका चिकित्सकको टोली आएर अनुसन्धान शुरु गरेको छ । थप अनुसन्धानका लागि कङ्काल साँझ ६ः३० बजे शिक्षण अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Prevप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै, कालो चिया पिए सोमबारसम्म डिस्चार्ज गरिने
Next१० रुपैयाँमा पाइने मास्क बजारमा ३०० रुपैयाँसम्म पर्न थाल्यो, मास्क लुकाउने र बढी मुल्यमा बेच्नेलाई २ लाख जरिवाना हुने !
सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत को’रोना सं’क्रमित २ जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ
कास्कीको क्वारेन्टाइनमा एक जनाको मृत्यु, पुरै गाउँ त्रसित